Gabdho mataana ah oo waxbadan ku mataanoobay | Biyoguurenews.com
Home Faallooyin Gabdho mataana ah oo waxbadan ku mataanoobay
Gabdho mataana ah oo waxbadan ku mataanoobay
Dhakhaatiirtan walaalaha ah Dr Iyerusaalem Getaahun iyo Dr Qalkidan Getaahun waxay ku dhasheen kuna soo barbaareen magaalada Shaashamane ee dalka Itoobiya.
Dugsiga hoose, dhexe iyo sare halkaa ay ku soo qaateen waxayna imtixaanka dugsi sare lagaga baxo ay keeneen isku dhibco.
Dhakhaatiirtan walaalaha ah Dr Iyerusaalem Getaahuun iyo Dr Qaalkidaan Getaahuun waxay ku dhasheen kuna soo barbaareen magaalada Shaashamane ee dalka Itoobiya. Dugsiga hoose, dhexe iyo sare halkaa ay ku soo qaateen waxayna imtixaanka dugsi sare lagaga baxo ay keeneen isku dhibco.
Xaruunta Caafimaadka ee Mataanaha Waxaa maareeya ka aha Dr Iyerusaalem halka ay Dr Qaalkidaan ay tahay maareeye ku xigeen.
Labadan gabdhood ee mataanaha oo aan muuqaalkooda iyo dabeecada badanba ka mideysan waxay kala weyn yihiin 5 daqiiqo oo keli ah.
Codkeeda, Dhirirkooda, Miisaankooda, Natiijadooda waxbarasho, Dareenkooda, Rabitaankooda, kabaha ay xidhaan, wey isaga eg yihiin ilaa ay waaliddiintooda iyo dadka xaruuntooda u imaado inuu iska daweeyo ay ku adkaato iney kala gartaan.
Iyaga laftooda waxay kuu sheegayaan iney waxba ku kala duwaneen, haddii ay kala maqan yihiin xitaa ay isku si wax u dareemayaan, mid haddii ay bukooto tan kalana ay bukooneyso, haddii ay faraxdo ama ama ay midkood mururgootana sida oo kale waa ay dareemayaan.
Hooyada dhashay labadan dhakhtar ee mataanaha ah waxay sheegeysaa “iney iyada lafteed ay ku dhibtooto iney si fudud ku kala garato oo marar badan ku khaldantay gaar ahaanna marka ay teleefan kuugula hadlayaan qofka kula hadlayo ma garan kartid ilaa ay iyada iisu kaa sheegto.”
Waxbarashadooda heer jaamacadeed marki ugu horreysay waxay ku soo qaateen Jaamacadda Hawaasa iyaga oo bartay maaddada Medical Laboratory Technology dhibco aad u sarreeya ayey keeneen.
Kaddibna waxay waxbarashadooda dhakhtarnimo ka barteen Hayat Medical College oo ku taallo magaalada Addis Ababa, markay ka qalinjabiyeen jaamacaddaasina waxaa lagu wada qoray Isbitaal ay dowladdu leedahay oo ku yaalla degmada Malkaa. Wakhti xaadirkannaa waxay furtay xaruun caafimaad oo ay ugu magac dareen ‘Xaruunta Caafimaadka Mataanaha’.
Waxa keli ah ee lagu kala saari karo markay kula joogaan ayey tiri hooyadood “midbaa xoogahaa aamusan midna wey qosol badan tahay balse wax kale oo lagu kala garan karo ma jirto.”Inta badanna waxaa ay jecel yihiin iney isku dhar iyo isku kabo qaataan taasoo qofka aan aadka u garaneyn ku sii adkeyneyso inuu si fudud u kala saaro.Waxayna dhakaatiirtaasi sheegeen dhibka keli ah ee ay la kulmeen inti ay noolaayeen ay tahay inaan saaxib rag ah ay lahayn maadaamaa qofka ay mid ka hesho tan kalana ka heleyso cabsi ay ka qabaan iney kalamhinaasaan awgood iney labadooduba xiriir la sameeysanin saaxibtinimada ragga.
Previous articleDaawo Goalha Deganka Berbera oo qabsaday kalfadhigii 19 iyo Mudo Xileedkoodii oo dhamad ah
Next articleSiyaasiga Cabdiraxmaan cabdishakuur oo daboolka ka qaaday in farmaajo maleegayo dariiq uu ku Kordhisto waqtiga